Just gurmad aad iPhone la Lugood, laakiin wax fikrad ah oo ku saabsan halka ay gurmad iPhone goobta yahay? Ugu dambeyntii, waxa aad ka helaysaa goobta, laakiin aadan aqoon sida loo bedelo? Ha welwelin. Way fududahay in la qaban. Maqaalkani waxa uu ka caawiyaa si ay u xaliyaan dhibaatooyinka ku saabsan iPhone gurmad meesha aad joogto. Iska akhriso on.
Qaybta 1. Halkee kaabta iPhone Location Ma Qaybta 2. Sida loo iPhone kaabta Location beddel Qaybta 3. Maxaad doonaysaa in ay tirtirto kaabta iPhone Location ka Qaybta 4. Sida loo Delete hayaan ee iPhone Qaybta 5. Sidee soo celinta iPhone ka dib markii takhalusid hayaan
Qaybta 1. Ma iPhone kaabta Location
hayaan Lugood ay ku kaydsan yihiin degaanka on your computer. Waxay waxaa la geeyaa username / Library / Codsiga Support / Mobilesync / kaabta (Hubi meesha uu kala duwan ee gurmad in OS kala duwan ee miiska). Si fudud u maraan si ay folder ku habboon ee aad app Finder.
Folder kasta oo ka yar ee kaabta ku jira gurmad ah hal. Fayl ayaa la koobiyeyn karaa oo u dhaqaaqay meel kombiyuutarka, nasiib darro aan software habboon, waa wax aan macquul aheyn inay beerta soo xaabxaabto macluumaad kasta oo macne leh ka files kuwan.
1. Lugood Goobaha kaabta u Operating Systems kala duwan
Lugood ee kaabta Location
Mac OS ~ / Library / Codsiga Support / MobileSync / kaabta /
(The "~" ka dhigan folder Home ah. Haddii aadan arki Library gal gurigaaga, qaban Xulashada iyo guji menu Go ah.
Windows XP \_ Documents iyo Settings \_ (username) \_ Codsiga Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ \_ kaabta
(Si dhaqso ah u helaan ka folder Codsiga Data, riix Start , iyo dooran Run . Nooca appdata iyo riix OK .)
Windows Vista \_ Users \_ (username) \_ AppData \_ barqiyey \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ \_ kaabta
(Waayo, helitaanka si deg deg ah si ay u folder AppData, riix Start . In bar raadinta, nooca appdata iyo saxaafadda noqo .)
Windows 7 \_ Users \_ (username) \_ AppData \_ barqiyey \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ \_ kaabta
Windows 8 \_ Users \_ (username) \_ AppData \_ barqiyey \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ \_ kaabta (Waayo, helitaanka si deg deg ah si ay u folder AppData, riix Start . In bar raadinta, appdata nooca iyo saxaafadda noqo )
Fiiro Gaar ah: Wixii dadka isticmaala Windows: Arjiga tusaha Data iyo AppData iyo waxyaabaha iyaga ku hoos qarsoon yihiin. Taasi macnaheedu waa in aad u baahan tahay si ay awood 'Show files qarsoon' gudahood Windows Explorer hor aragtida faylasha.
2. iCloud Location kaabta
On aad iPhone, dooro ettings > iCloud , ka dibna tubbada Kaydinta & kaabta .
In Mac, u tag Apple menu> rabtid System , guji iCloud , ka dibna riix Maamul .
In aad Windows computer: Windows 8.1: Tag screen Start iyo guji fallaadhiina waxay hoos ku geeska hoose ee bidixda. Riix app iCloud ah, ka dibna riix Maamul.
Windows 8: Tag ka Start screen iyo riix iCloud leben, ka dibna riix Maamul .
Windows 7: Dooro menu bilow> All Programs > iCloud > iCloud , ka dibna riix Maamul .
Qaybta 2. Sida loo beddel iPhone kaabta Location
Your Disk C waddaa ku dhowaad meel bannaan, si aad u rabto in aad beddesho gurmad iPhone goobta u meel kale oo bilaash ah ilaa C Disk ah? Rabo in uu kaydiyo xogta muhiim ah aad, sida iPhone hayaan ku SSD, ma digsi C? Waxba ma ahan wixii sabab yahay, halkan waa sida aad u bedeli kartaa iPhone gurmad goobta.
Fiiro gaar ah: Halkan, waxaan diiradda ku saabsan isbeddelka Lugood gurmad goobta ku computer Windows ah. Sida gurmad iCloud, waxa la badbaadiyey in server Apple. Waxaad ka bedeli kartaa akoonka iCloud haddii aad rabto. Just guji Settings > iCloud > Account aad iPhone. Gal baxay xisaabtaada iCloud iyo gasho mid kale.
Raac tallaabooyinka hoose.
1. In Windows 8/7 / Vista
Tallaabada 1. Close Lugood.
Tallaabada 2. Dul folder meesha hayaan iPhone yihiin. Copy dhammaan faylasha gurmad iyo iyaga paste si gal kasta oo aad rabto in aad badbaadin hayaan iPhone. Tusaale ahaan, waxaad badbaadin kartaa iPhone hayaan on Disk E: kaabta \_ iPhone.
Tallaabada 3. Tag geeska hoose ee bidixda iyo riix Start . In sanduuqa raadinta, geli cmd.exe. Barnaamijka cmd.exe ayaa muujiyay kor. Xuquuqda waxaa guji iyo dooran Run sida maamulka.
Tallaabada 4. In amarka dhakhso pop-up ah, geli Taliyaha ah: mklink / J "C: \_ Users \_ (username) \_ AppData \_ barqiyey \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ kaabta" "D: \_ kaabta \_ meel gaarka".
Tallaabada 5. markaas, isku day taageero aad iPhone la Lugood iyo hubi in faylka gurmad waa la badbaadin doonaa in aad folder doonayo.
2. In Windows XP
Tallaabada 1. Hubi Lugood ma soconayo.
Tallaabada 2. Download iyo Macdan utility isgoyska kombiyuutarka.
Tallaabada 3. siibka Junction.exe in folder aad username, kaas oo inta badan laga helaa C: Documents \_ iyo Settings \_.
Tallaabada 4. Tag Lugood gurmad meel gal ah oo ka guurto files gurmad si folder kale, sida G: \_ gurmad Lugood.
Tallaabada 5. Click Windows + R. Marka wada hadal ah ka soo bixi, cmd.exe nooca iyo riix OK .
Tallaabada 6. In si degdeg ah amarka, la abuuro hal dhibic Isgoyska NTFS ah, tusaale ahaan.
cd Isgoyska Desktop "C: Documents \_ iyo Settings \_ (username) \_ Codsiga Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ kaabta" "G: \_ kaabta Lugood"
Tallaabada 7. Hadda, gurmad ah gurmad iPhone la Lugood iyo hubi in file gurmad badbaadi doona buuga cusub folder.
Tallaabada 2. Tag ~ / Library / Codsiga Support / MobileSync / / kaabta. Copy dhammaan faylasha gurmad si wadid aad u jeclaystay, sida Dibadda.
Tallaabada 3. Daahfurka Terminal (ku yaal Codsiyada / Utilities / Terminal) oo la furo degdeg ah amarka ah. Samee link calaamad adigoo isticmaalaya amarka la mid ah mid ka mid hoose,
lihida -S / Buugaag / External / kaabta / ~ / Library / Codsiga \_ Support / MobileSync / kaabta
Tallaabada 4. Isticmaal Lugood in gurmad aad iPhone. Markaas, waxaad tagtaa gurmad ah folder cusub si ay u arkaan in file gurmad waxaa ka ama ma aha.
Qaybta 3. Maxaad doonaysaa in ay tirtirto gurmad iPhone ka Location ka
Marka ay timaado in la tirtiro gurmad iPhone, fara badan sabab u ah ee aad qabto. Halkan, waxaan ku qor qaar iyaga ka mid ah.
Sababaha ku saabsan sababta ay tirtirto hayaan Lugood
1. Soo qaado mar walba oo aad qasan dooro file ah oo gurmad ah ka badan.
2. Tobanaan kun oo files yihiin in gurmad iPhone meesha aad degan tahay, inta badan la taariikhaha jir ka hayaan hore. Ma doonaysaa in ay tirtirto si lacag la'aan ah ilaa meel of your computer.
3. Lugood aan dib laga yaabo iPhone "iPhoneName" sababtoo ah gurmad wuu kharribnaa ama aan la socon iPhone. Ma doonaysaa in ay tirtirto gurmad u ah iPhone this, ka dibna isku day mar kale.
4. ma karaan gurmad aad iPhone, maxaa yeelay waxa ay sheegtay in ay tahay in aad tirtirto gurmad hore ugu horeeyay.
5. Hel iPhone cusub, laakiin waxa la heli karin u hayaan Lugood jir.
6. gurmad waayey oo uu kuu sheegayaa in ay tirtirto gurmad ah.
Sababaha ku saabsan sababta ay tirtirto hayaan iCloud u iPhone
1. iCloud gurmad xusuusta ku dhow buuxda oo gurmad ah ma awoodid in aad iPhone. Sidaas darteed, waxaad u leedahay in ay tirtirto ku hayaan jirka ka mid ah oo cusub.
2. Go'aan ka tirtirto gurmad iPhone ka iCloud sababta oo ah waxa ku jira file ah u kharribmay.
3. Dhawaan cusboonaynta si iPhone cusub, iyo dib u hore mid ka mid ah ilaa iyo in ay mid ka mid ah oo cusub oo dib loo soo celiyo. Hadda waxaad sii hesho wargelinta in aad qulqulaya ka kaydinta ku iCloud.
Qeybta 4: Delete kaabta iPhone
1. Delete Lugood ee kaabta File
Takhalusid gurmad ah waa sida fudud sida abuurista mid la mid ah marka laga reebo, suurta gal ma aha in si toos ah ay tirtirto gurmad ah ka Lugood. Si aad u tirtirto gurmad ah aad u baahan tahay in ay dib ugu halkaas oo ay ku yaalaan filesystem ah (username / maktabadda / Codsiga Support / Mobilesync / hayaan) maraan.
Markaas, xaq guji gurmad ah in aad rabto in aad tirtirto oo guji dhaqaaq Trash . Markii ugu soo socota si aad u faaruqiso qashinka, gurmad la weligiis doono.
Si aad u fur rabtid Lugood, Windows: Dooro Edit > rabtid
Mac: Dooro Lugood > Waxa aad rabtid
Fiiro gaar ah: Ka dib markii aad tirtirto dhammaan macluumaadka laga heli karo dhammaan warbixinta lagu lumin doonaa !!!
2. Delete iCloud File kaabta
Takhalusid gurmad iCloud ah waa fududdahay badan tirka mid yahay computer jirka ah!
Tallaabada 1. Waxaad u baahan tahay in la furo ilaa Settings aad iPhone iyo guji iCloud doorasho.
Tallaabada 2. tuubada Kaydinta & kaabta doorasho.
Tallaabada 3. Tubada on Maamul Kaydinta iyo ka dibna dooro gurmad ah
Ugu dambeyntii, ka jaftaa on kaabta Delete iyo aad gurmad iCloud iska tirtiro.
Qaybta 5. Sidee soo celinta iPhone ka dib markii takhalusid hayaan
Ma doonaysaa inay ka soo kabsadaan aad iPhone, nasiib daro aad kaliya heli file gurmad aad ka dhigtayna ayaa durba la tirtiray ka? Ha welwelin. Halkan waa jid toosan, waayo, waxaad si loo soo celiyo aad iPhone. Wondershare Dr.Fone Ee macruufka (Win) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) kaa caawinaysaa in aad ka iPhone soo celiyo files tirtiray effortlessly.
Kabsado xiriir la tirtiro, qoraalo, SMS, waano, jadwalka taariikhda, taariikhda WhatsApp, iwm ka iPhone.
Ceshano iPhone hayaan ka Lugood ama iCloud iyo badbaadin files in ay kombiyuutarka.
Khatarta-xor ah oo nabad ah, iyo dhaawac xogta lahayn.
Si fiican u shaqeeyaan iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 3GS / 4 / 4G / 3G.
10 Dhibaatooyinka Most-weydiiyo oo ku saabsan iPhone Update
Laba Siyaabaha Cusboonaysii iPhone Si fudud
Dhibaatooyinka Most-weydiiyo oo ku saabsan celinta iPhone
Talooyin iyo tabaha on syncing iPhone
Best 17 iPhone Apps Waxaad u
> Resource > iPhone > Sida loo Helo iPhone Location kaabta iyo Delete hayaan